Izay mirehareha miteny sy ny Voninahitr'Andriamanitra — Trip LEE - OFISIALY SITE
Tiako ankizy. Iray amin'ireo antony tiako ankizy dia satria mampiseho antsika ny tenantsika. Ry zareo toy ny fitaratra kely. Mamelà ahy hilaza aminareo ny zavatra tiako holazaina. Kids no tsara tarehy be rehetra mitovy zava-manahirana isika, fa ny olana dia be fotsiny Mazava kokoa, satria tsy fantany ny fomba hanafina azy ireo mbola. Izany no tena mazava, raha ankizy manao zavatra ry zareo tsy tokony hanao.
Asa ianao raha efa nahita zanak'osy ry zareo mikasika zavatra tsy tokony hikasika? Ho izy ireo mijery ny manodidina mba hahitana raha tadiavinao. Tsy miraharaha raha misy hafa ankizy mitady; izy ireo tsy te fotsiny ny olon-dehibe na ny ray aman-dreny mba hahita. Nahoana ireo no manao izay, anefa? Satria fantany ianao tompon'andraikitra, ary tsy tiako ho fantatra satria ianao mahalala ny iray dia tsy maintsy mamaly ny.
Olon-dehibe dia toy izany koa. Matetika izahay OK miaraka manao zavatra isika dia tsy tokony hanao, raha mbola ny olona tsy maintsy mamaly ny tsy hahita. Faly ianao mba hanafaingana mandra mahita polisy mialoha. Angamba faly izahay hiala ny asa tany am-boalohany, raha mbola toy ny mpampiasa tsy hahita. Angamba ny sasany amintsika hamitaka ny fitsapana raha mbola maharitra koa ny mpampianatra tsy hisambotra antsika. Tsy miraharaha matetika ny olona raha toa ka mahafantatra isika manao zavatra tsy mety, raha tsy izany ny fahefana ananantsika mba mamaly ny.
In 1 Samuel 2, Hana nivavaka ho valin 'ny niteraka ny zanany lahy Samuel. Ary amin'izany vavaka, Nampitandrina ny hafa izy mba tsy manao fahotana iray manokana, satria ny Mpitsara no mijery. Miverena hiaraka amiko ho any 1 Samoela toko faha- 2, andininy 3.
Aza miresaka izany tamim-pireharehana, na aoka ny vavanao miteny toy izany fiavonavonana, fa ny Tompo no Andriamanitra, izay mahalala, ary ao aminy no mandanja ny asa.
Ao amin'ity lahatsoratra, Hana Mampitandrina antsika hanohitra feno avonavona teny, satria Andriamanitra dia hahita ka Izy Ho mitana antsika ho tompon'andraikitra fa. Izany no Amiko, ny hevi-dehibe ao amin'io andininy io no: Raha miresaka-pireharehana, ianao no hamaly amin'Andriamanitra ho azy.
Mety halaim-panahy hieritreritra ny fieboeboana na ny teny tsy be. Fa raha ny hevitrao ny fieboeboana teny tsy manan-danja, Matahotra aho noho ny aminareo. Tokony zava-dehibe ho anao, satria zava-dehibe ho an'Andriamanitra, ary Izy no Ilay tsy maintsy mamaly ny. Dia tsy farany ny valin 'ny ray aman-dreny, na ny namana, na ny pasitora, fa amin'Andriamanitra.
Dia ao an-tsaina, Te-hanontany ny fanontaniana vitsivitsy mba hahatakatra tsara kokoa ny soratra.
fanontaniana 1: Inona no hevitry ny hoe Miresaka tamim-pieboeboana?
Izany dia midika hoe mampiasa ny teny mba hanandratra ny tenanao.
Ary matetika isika no mieritreritra ny tena-manandratra fotsiny ny teny toy ny hirehareha fotsiny momba ny fomba mahagaga isika, Fa misy fomba maro mba hiresaka tamim-pireharehana. Ary mino aho fa iray amin'ireo fomba izay Hana manana ao an-tsaina no hitantsika ao amin'ny toko faha- 1.
Hana no vadiny ny lehilahy iray atao hoe Elkana. Izy dia tsy ny vadiny ihany no aza. Nanana vady iray hafa atao hoe Penina. Penina nanan-janaka, Fa Hana momba. Ary Penina no ankapobeny mihantsy Hannah momba izany. Ary noho ny hoe momba ary izany Hana dia nalahelo miteny ratsy, ary izy no nitomany.
Mihevitra aho fa Penina dia ohatra ny fieboeboana teny Hana mampitandrina antsika hanohitra. Penina dia tsy nanondro fotsiny ny zava-misy fa nanan-janaka izy. Izy tsy miezaka fotsiny mba hampahatsiahy Hana ny zava-misy. Izy no miteny ratsy azy, mirehareha noho ny aminy, ny fampijalian azy.
Izany fotsiny izy toa ny hoe midika. Ahoana no miresaka pireharehana? Tsara izany dia toa tahaka ny Penina no mampiasa izany ho toy ny fomba mba milaza ny tenany ny Hana. Toa tahaka ny mihevitra ho manana ho izy fa sao ny fitondrana vohoka dia nahatonga azy tsara noho Hana, izay tsy marina. Soratra Masina milaza mazava tsara fa ny zanaka dia fanomezana avy amin'ny Tompo. Penina Niresaka pireharehana, ary izy tsy maintsy hamaly amin'Andriamanitra ho azy.
Fomba miresaka tamim-pieboeboana
Na isika manaiky izany na tsia, isika rehetra-pireharehana miresaka sy miteny amin'ny fireharehan'ny amin'ny fomba isan-karazany:
1. Iray fomba mazava dia hirehareha momba ny zava-bitany. Indraindray tsy afaka miandry mba hilaza amin'ny hafa momba izay ananantsika sy ny zavatra efa tanteraka. Fa isika tsy mba nidera an'Andriamanitra noho izany; ny tanjona dia manao tsara kokoa ny tenantsika mijery. Tratra ny tenako aho manao izany Imbetsaka. Angamba mihazakazaka ho any an-antitra namana ary manontany ahy ny zavatra foana aho manao. Ahy dia afaka miteny rapping, fa Aleoko manondro ny mari-pankasitrahana na zava-bita hafa.
2. Ary ahoana ny momba ny zavatra momba ny olona? Indraindray isika dia manendrikendrika ny hafa. Tiantsika hanoratanao azy amin'ny ratsy hazavana, mba Ho mijery tsara. Angamba any am-piasana no milaza fa iray manokana mpiara-miasa dia somary kamo, ka dia ho voamariky ny olona ny maha samy hafa ny anareo roa. Na mety raha tokony ho tsara fanahy amin'ny hafa, izahay-tena ho marina. Isika hijoro ho mpitsara azy, satria mahatonga antsika hahatsapa tsara kokoa momba ny zava-bita ara-panahy. Izany no teny feno avonavona.
3. Na indraindray na dia milaza zavatra tsara isika. Angamba izany fijoroana ho vavolombelona amin'ny Alahady alina. Mety ho mahaliana tantara momba ny asa eo amin'ny fiainan'ny namana, fa ny antony manosika mety ho voninahitr'Andriamanitra fa tsy ny. Na famelana olona iray mahafantatra anao Efa nivavaka ho azy ireo. Na fampianarana ny kilasin'ny Sekoly Alahady. Na dia zava-tsoa mety ho mirehareha teny raha ny tanjona dia fanandratana ny tenanao.
Ny sasany amin'ireo ohatra ireo mazava kokoa noho ny hafa. Koa ahoana no ahafantaranao raha toa ka? Inona no mampisaraka teny miavonavona tsy hilaza zava-misy? Niresaka tamim-pireharehana dia rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra ho toy ny iray izay ny mpanjaka sy mendrika ny voninahitra, ao am-ponao, na ny teny ny tenany. Ary rehefa manao izany, dia maka voninahitra izay an'Andriamanitra.
Ny teny manaiky an'Andriamanitra, Ahoana kosa ny ao am-ponao? Ny olona sasany dia mety tsy ho afaka milaza ny fahasamihafana, Fa Hana mampahatsiahy antsika fa ny Tompo no Andriamanitra, izay mahalala. Ary raha mampiasa ny teny mba hanandratra ny tenantsika, Tsy maintsy namaly azy noho izany.
Ao amin'ny lahatsoratra milaza amintsika Hana tsy hiresaka tamim-pireharehana, ary avy eo dia nolazainy ny antony: satria ny Tompo no Andriamanitra izay mahafantatra sy milanja asa.
fanontaniana 2: Nahoana isika no ho valin 'Andriamanitra noho Izay mirehareha miteny?
Satria izany namely ny voninahiny.
Raha iray amin'ireo andian-teny roa farany marina, mety hanova be. Raha Andriamanitra nahalala, fa tsy ny mpitsara, na raha Andriamanitra no mpitsara, nefa tsy fantany. Fa ny tanteraka Mpitsara marina ihany koa ny rehetra-nahalala an'Andriamanitra. Tsy Andriamanitra ihany no hahita, Izy ny mihaino. Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny rehetra miala amin'ny resaka izay no mitranga. Saika toy ny tsy manam-petra Manana vola ny fiarovana fakan-tsary napetraka ao amin'ny kianja rehetra pototry ny tany. Fantany. Ary raha hanafika ny voninahiny amin'ny teny miavonavona, Izy no mahalala.
Raha dia ny miditra ao amin'ny kaonty banky, ary haka vola sy mampihatra azy io ho ahy izany, dia ny hoe mangalatra? Mazava ho azy izany. Aho maka zavatra izay ny anao, ary ny fampiharana izany ho atỳ amiko. Tsy afaka manome ny tenako na ny vola tsy maka azy amin'ny aminao. Ary ny ratsy satria ny anao.
Raha olombelona miezaka hanome voninahitra ny tenany, mamabo, Andriamanitry ny ny. Tsy afaka Manomeza an'i tenanao fiderana sy voninahitra, tsy mangalatra avy amin'Andriamanitra. Pride dia fanafihana ny voninahitr'Andriamanitra. Nahoana? Satria ny overestimation ny tena dia avy amin'ny underestimation 'Andriamanitra. Aoka aho fa indray: ny overestimation ny tena dia avy amin'ny underestimation 'Andriamanitra. Ary tahaka ny hita ao amin'ny 1 Samuel 1, izany underestimation 'Andriamanitra, koa dia mitarika ho amin'ny underestimation ny olon-kafa. Noho izany tena mieritreritra loatra ny tenantsika avy amin'ny mieritreritra loatra ambany 'Andriamanitra, ary mitondra any ambany loatra mieritreritra ny olon-kafa.
Penina i Diso hevitra. Izy ampianarina hahalala ny tenany amin'ny fametrahana ny tenany eo amin'ny seza fiandrianana Fara Tampony, toy ny raha nanokatra azy ny kibo. Ary matetika izahay meloka ny amin'ny iray ihany. Heverinay izahay ireo izay tokony hahazo izany voninahitra ho an'ny fisondrotana, na ireo izay hendry tsara ny ankizy, na ny toe-javatra ara-bola. Eny, Andriamanitra hamaly soa ny asa mafy, fa izay tsy miantoka na inona na inona. Ny sitrapon'Andriamanitra no tena manapa-kevitra amin'ny lafin-javatra rehetra toe-javatra. Ny zava-dehibe tamin'ny farany dia tsy ny herintsika, ny fahendrena, na dia ny tsy mivadika.
feno avonavona miteny
Noho izany ny avonavona tsy mety. Isika rehetra dia manana ny avonavona ao am-pontsika fa tsy maintsy hiady. Raha ny hevitrao ao am-ponao izay mendrika voninahitra, fa aza dia fahotana. Fa fieboeboana teny no mandray azy io ho ambaratonga hafa. Ahoana no afaka isika, toy ny olombelona mpanota, manana ny fahasahiana, tsy mba mieritreritra izahay mendrika ny voninahitr'Andriamanitra, fa ny marina hanatitra azy izany ny hafa? Mba miezaka ny handresy lahatra ny hafa mba hanome antsika ny voninahitra izay an'Andriamanitra irery ihany. Miresaka pireharehana dia toy ny tsy vitan'ny mandroba olona, fa filazana ny rehetra momba izany, ary mampahery azy ireo mba hanao toy izany koa.
Ny hany zavatra, Andriamanitra tsy mila ny mahafantatra lahatsary meloka ianao. Andriamanitra tsy handefitra olombelona miezaka ny mampahory azy ny voninahiny sy ny famporisihana ny hafa hanao toy izany. Izay no antony Hana miteny fa tsy tokony hanao izany.
Fieboeboana teny dia maka ny ady amin'Andriamanitra, izay no mahatonga azy io ho tsy mifanaraka amin'ny fiainan'ny mpino. Rehefa nandre izany maraina, "Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona, fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. "
Raha tsy ao amin'i Kristy ianao, mirehareha ny teny, dia ho antony hafa koa Andriamanitra mba hanasaziana antsika. Ny asa ratsy dia hanohy hanampy ny be raharaha hamely anay. Raha tsy ao amin'i Kristy, Tsy misy zavatra hafa mampihorohoro noho ny rehetra-satria fantatrareo Mpitsara. Koa raha ianao eto anio alina nefa tsy Jesosy, azafady hahafantatra Azy. Mialà amin'ny fahotana, ary mianjerà teo ny famindram-pony. Manetry tena izy mampino-manetry tena ampy ho faty mba mpanota toa ahy sy ianao afaka miaina. Nitsangana avy ao am-pasana amin'ny hery, ary miantso ny olona mba hanaraka Azy. Isika tia Te hiresaka aminareo momba izany rehefa afaka izany bebe kokoa.
Fa tahaka ny Kristianina, inona no atao hoe noho ny asany mba ho nilanja? Mpino rehetra amin'ny efitrano ity dia tsy maintsy hamaly amin'Andriamanitra ho an'ny rehetra ny teny miavonavona izy ireo miteny, fa ny fitsarana dia ho hafa. Kristy efa nandray ny fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana. Fa fampitandremana io dia tokony mbola hisy fiantraikany ny fomba fiainantsika. Rehefa mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ny asany dia ny mijoro ho vavolombelona na ny zava-misy fa efa nanantena an'i Kristy na hoe izahay hirehareha loatra ny matoky ao amin'i Kristy irery ihany no.
koa, tiantsika ny hampifaly ny Ray. Mazava ho azy fa Izy no faly amintsika ao amin'i Kristy, fa tiantsika ho faly miaraka amin'ny asa tsara izay tonga avy any amin'ny finoana an'i Kristy. Te hampifaly an'Andriamanitra be fitiavana.
Tsy tokony havelantsika ho avy miavonavona teny avy amin'ny vavan'ny. Ary aza isika dia tsy maintsy hamaly an'Andriamanitra noho ny miavonavona teny, Tokony hidera an'Andriamanitra isika fa ny fahotana voasarona ao amin'i Kristy.
Koa raha tiantsika Andriamanitra mba homem-boninahitra noho ny teny, ahoana no miady mpirehareha ity lahateny?
fanontaniana 3: Ahoana no mirehareha miady miteny?
Ataontsika izany amin'ny alalan'ny faly an'Andriamanitra.
Tokony hijery ny teny, fa tsy ampy. Tahaka filazana olona amin'ny hatsiaka fotsiny ny vahaolana dia ny hihazona ny sneeze in. No, ny aretina no tokony nanafika.
Ny miavonavona am-po mifaly ao mihitsy. Fa ny manetry tena am-po Faly an'Andriamanitra. Jereo ny voalohany Hana teny ny vavaka eo amin'ny andininy faha 1: "Faly ny foko ao amin'ny Tompo." Hannah dia mampiseho antsika ny tokony valiny ho an'i Jehovah ny fitahian'i. Tsy faly amin'ny zavatra fotsiny ny Tompo dia nanome, fa amin'ny Mpanome mihitsy. Ny valiny mety ho hirehareha, fa kosa tokony hamokatra fanetren-tena ao amintsika, satria isika mandray fanomezana avy amin'Andriamanitra
Andriamanitra dia manome ary manaisotra. Andriamanitra mizara sy manampina. Fa izy manao izany rehetra izany noho ny tsara sy ny voninahiny. Tsy nihozongozona rehefa manomboka miantehitra ireo zavatra be loatra. Fifaliana an'Andriamanitra mamono na ny avonavona sy fahadisoam-panantenana.
Ahoana no hifaly amin'Andriamanitra? Ataovy ny zavatra ilaintsika mba hampahatsiahy ny tenanao iza no ao ambadiky ny zava-drehetra. Derao Andriamanitra rehefa mandray izany maso. Izany no mahatonga antsika misaotra an'Andriamanitra ho eo anatrehany ny sakafo. Mahatsiaro fa izany miavonavona ny mieritreritra foana ny drafitra mivoaka. Lazao Tompo vonona. Omeo voninahitra Andriamanitra rehefa misy olona miarahaba anao eo amin'ny zava-bita. Aza ho minitra mamela ny fonao mba handray bola. Tandremo ny teny feno avonavona. Tadiavo ny fototry ny avonavona ao am-ponao.
Tsirairay avy amintsika dia nomena fahafahana iray mahagaga amin'ny teny tsirairay dia miteny. Izahay vao mahazo mampiasa ny teny mba hanome voninahitra ny Andriamanitra izay nanao antsika. Izahay vao mahazo mampiasa ny teny mba hanampiana ny hafa hahita an'Andriamanitra noho ny Tompo be voninahitra fa Izy no.
Koa ny fampaherezana dia tsy mampiasa ny teny mba hanandratra ny tenanao. Tsy, hampiasa azy ireo mba hanao izay namoronana anao hanao-hanome voninahitra an'Andriamanitra. Izany rehetra an'ny Azy ihany.
aimsbaker • Septambra 10, 2013 amin'ny 1:39 PM • navalin'i
Izany Tena mamelombelona sy mandresy lahatra. Misaotra anao indrindra! Efa nahazo ny sasany mianatra ny atao mba hanao ny faharesen-dahatra izany azo antoka.
faithchanda171 • Septambra 10, 2013 amin'ny 1:47 PM • navalin'i
ry Tompo,ny mifalia amin'ny ho anao irery ihany no mendrika ny glory.help antsika rehetra tompoko mba hifaly aminareo mandrakariva, ary tsy handany ny ny voninahitrao ary enga anie isika rehetra haetry eo anatrehan'ny. Hamela ny helotsika noho ny hanisy ratsy anao sy ny olona rehefa miresaka amin'ny avonavona. Hampifaliana ry famonjena antsika ho feon'ny fieritreretana bebe kokoa amin'ny zavatra lazaintsika…Amen
Godson • Septambra 10, 2013 amin'ny 1:52 PM • navalin'i
ny Mpamorona, Tsy misy ny lehibe noho ny Mpamonjy lalao-changer / demonia-an'izay nahafaty olona tsy misy ilaina ny ho mpilalao
Christopher • Septambra 10, 2013 amin'ny 2:24 PM • navalin'i
Olona ny fampidirana nisintona ahy amin'ny…dia ny fahamarinana! Hatramin'ny manan-janaka aho ny manokana hitako ao aminy ny tenako isan'andro. Ny hafatra rehetra namonjy nitso-drano ahy! Grace sy Fiadanana!
Sambatra • Septambra 10, 2013 amin'ny 3:16 PM • navalin'i
mba hamelomana! Misaotra anao! tiako ity: “Niresaka tamim-pireharehana dia rehefa tsy manaiky an'Andriamanitra ho toy ny iray izay ny mpanjaka sy mendrika ny voninahitra, ao am-ponao, na ny teny ny tenany. Ary rehefa manao izany, dia maka voninahitra izay an'Andriamanitra” ary izany:”Rehefa mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ny asany dia ny mijoro ho vavolombelona na ny zava-misy fa efa nanantena an'i Kristy na hoe izahay hirehareha loatra ny matoky ao amin'i Kristy irery ihany.”
QuincyStroman • Septambra 10, 2013 amin'ny 3:45 PM • navalin'i
Nampiasa ny Tompo anao mba hampaherezana ahy ny teniny… An Thass Vaovao Tsara
eveno M. • Septambra 10, 2013 amin'ny 3:48 PM • navalin'i
Izany no tena tsara hamaky. Na dia ao anatin'ny fanetren-tena, isika Mila mitandrina isika fa tsy manao ny hanao izay hahitan'ny olona fa manetry tena, izay fotsiny no feno avonavona.
Izany no manazava ny antony ny filozofa grika no tsy mino fa ny fanetren-tena dia ny hatsaran-toetra, satria afaka sandoka maro izany.
Jason • Septambra 10, 2013 amin'ny 5:29 PM • navalin'i
Tsy hoe mba hanipy Trip ambany ny fiara fitateram-bahoaka, na manana fikasana eo amin'ny manomboka ny adihevitra an-tserasera. Izaho ihany no mangataka fanazavana. Aho vao haingana nahazo diplaoma mitady asa. Ahoana no tsy teny miavonavona amin'ny asa fanadihadiana izay tsy maintsy amin'ny fomba hahazo aina tsara ny manazava ny zava-bita mba azo atao mpampiasa?
Trip Lee • Septambra 11, 2013 amin'ny 10:40 aho • navalin'i
Ianao tsy manipy ahy eo ambany ny fiara fitateram-bahoaka Rahalahy! Mino aho fa izany no fanontaniana lehibe. Araka ny voalazako etsy ambony, mirehareha miteny rehefa mampiasa ny teny mba hanandratra ny tenanao. Izany rehefa tsy mety manaiky an'Andriamanitra ho Mpanjaka sy mendrika ny voninahitra.
Hianao dia afaka manazava ny zava-bita sy ny handresy lahatra olona iray Te hanao asa tsara tsy misy mangalatra Andriamanitry ny voninahiny (sady koa anie, ny fanoloran-tena ho Azy no tokony hitarika antsika hiasa amin'ny fomba tsara indrindra). Tsy voatery hoe “ho an'Andriamanitra anie ny voninahitra” taorian'ny didim-pitsarana rehetra, fa tokony hanao izany rehetra izany amin'ny fihetsika feno fanetren-tena manaiky an'Andriamanitra ho toy ny mpanome ny fanomezam-pahasoavana tsara rehetra. Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny manetry tena manondro ny compétence na nirehareha fireharehana. Misy dikany?
Jesse • Septambra 11, 2013 amin'ny 1:13 PM • navalin'i
Ahoana, amin'ny kolontsaina izay frowns amin'ny soatoavina kristianina rehefa naneho, dia isika mihevitra ny hahazo, ary mihazona ny marina karama, ny avonavontsika tsy nahazo ny tsara indrindra avy amintsika? Aho miezaka ihany koa ny tsy hanipy anao eo ambany ny fiara fitateram-bahoaka ary hahita fahadisoan'ny, fa ho toy ny tanora izay te mafy hiaina ny “unashamed fiainana” ka namelatra ny filazantsara amin'ny zava-drehetra ataony, Izaho koa dia mila asa. Mieritreritra aho fa ny olana dia tsy ho afaka haneho ny tena tao amin'ny toeram-piasana tsy misy ny tahotra ny ho voaroaka.
John • Septambra 11, 2013 amin'ny 8:58 aho • navalin'i
Toy hoy izy:, niteny tamim-pireharehana dia tsy hoe milaza zava-misy. Izany dia midika hoe mitady ny manandra-tena, fa tsy amin'Andriamanitra. Afaka mandresy lahatra olona iray Te hanao asa tsara, tsy mandroba Andriamanitry ny voninahitra no mendrika noho ny fahaizana sy ny asa tsara
DaughterofGod • Septambra 11, 2013 amin'ny 1:27 PM • navalin'i
Aho manana fotoana sarotra izany notsongaina: “Raha ny hevitrao ao am-ponao izay mendrika voninahitra, fa aza dia fahotana.” Rehefa manao zavatra excellently, I maniry ny Pat ao ambadika, ny teny fampaherezana, na ny filazana fa ny asa no nahazo toy ny tena tsara. Isika hidera atleta sy ny fanatanjahan-tena ekipa sasatry ny, sy ny tontolo rehetra miasa amin'ny loka sy ny sehatra manome voninahitra tsara. Koa ahoana no saika 'Vonoy ny’ izany faniriana izany ny ahy, rehefa, amim-pahatsorana, Tsy te-? Heveriko fotsiny, ao am-pontsika, fanekena fa ny tsara sy ny asan'ny tananay dia avy Aminy, ary attributing tanana aminy rehetra azontsika Aminy.
Michael • Septambra 11, 2013 amin'ny 1:49 PM • navalin'i
Fotsiny aho te-hitondra izany fahafahana misaotra (Trip Lee) fa ny famelana an'Andriamanitra mampiasa anao mba hanome voninahitra Azy. Me sy ny vadiko tena mankafy ny mozika. Ny toerana tena hira mazava ho azy dia “zava-tsoa”. Novakiko fa nitohy intsony ny fanaovana mozika bebe kokoa hanohy ny fanompoana, izany marina? Mila rappers bebe kokoa tahaka anao Rahalahy.
JB • Septambra 11, 2013 amin'ny 3:46 PM • navalin'i
Trip no miombon-kevitra amin'ny ankamaroan'ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ity bilaogy momba ny zava-dehibe ny teny afa-tsy ny fanambarana nataonao fa “Andriamanitra dia manome ary manaisotra ary dia mizara sy manampina”. Andriamanitra 100% tsara! Tsy misy ny grama ny ratsy ao aminy mba miezaka ny manao ratsy, na haka na inona na inona hiala amintsika. Satana mangalatra (maka / manampina), Mamono, ary manimba. Isika amin'ny maha-mpino (na ny tsy mpino) manao izany ny tenantsika amin'ny alalan'ny tsy nankatò (na satria tsy nahalala ny) ny ara-panahy fenitra Andriamanitra efa nametraka eto an-tany. Halan'Andriamanitra ny avonavona no tena satria mahatonga ny fanivanana mba handray ny feno dia toy izany hatsaram Tena tiany ny hanana izay afaka manome Satana (ary ny miaramilany) zo ara-dalàna ho avy ka pelatànana eo amin'ny fomba feno avonavona. Tsy mankahala teny, na miezaka ny hiresaka midina any aminareo, fa misokatra ny fifanakalozan-kevitra izay mino dia ny tombontsoan'ny bilaogy.
Trip Lee • Septambra 12, 2013 amin'ny 1:23 PM • navalin'i
Misaotra mamaky teny! Ary noho ny teny mampahery. Miombon-kevitra aminao aho, fa Andriamanitra no 100% tsara. Tsy misy isalasalana ny momba izany. Saingy tsy midika Tsy manaisotra. Ahoana ny Joba 1:21? Ny sasany izay nolazaiko hoe: ambony i marina izany teny nindramina avy amin'ny andininy. "Nitanjaka no nivoahako avy tany an-kibon'ineny, ary mitanjaka no hiala. Ny Tompo no nanome ary ny Tompo no nanaisotra; Mety ny anaran'ny Tompo no hoderaina. "
Noho izany dia tsy manaisotra, ary mbola tsara. Ny zavatra tsara tarehy dia, Andriamanitra dia mampiasa na dia zava-dratsy ho tsara eo amin'ny fiainan'ny olony. Romanina 8:28 dia ohatra tsara ny amin'izany. Mba manoratra lahatsoratra iray manontolo izany dia afaka manao izany mazava kokoa. Misaotra indray ny famakian-teny!
RW • Septambra 11, 2013 amin'ny 8:35 PM • navalin'i
Araka ny voalaza Trip, Andriamanitra mahalala ny. Na manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny feo avo, na hitondra voninahitra ho an'ny zava-bita mafy, Andriamanitra mahalala izay ao am-ponao no manome voninahitra. Raha niresaka ny ny voninahitr'Andriamanitra mafy koa ho rehareha teny fonao raha tsy tena manome voninahitra an'Andriamanitra. Rehefa miresaka foana ny voninahitr'Andriamanitra manodidina ny mpino, isika dia toy Penina sy ny tsy mpino dia toy Hana. Amin'ny maha Kristianina antsika manana fironana hahatsapa fandrahonana rehefa tsy afaka midera an'Andriamanitra ampahibemaso. Anisan'ireo mpino isika dia tahaka ny Penenniah amin'ny fitahiana ara-panahy fa tsy ny ankizy sy ny tsy mpino no Hana izay sisa raha tsy manana ireo fitahiana toy ny Hana dia tsy ny ankizy. Ny zavatra tsapantsika dia fiderana an'Andriamanitra, dia tena mirehareha ny fitahiana. Tsy maintsy ho vonona ny hidera an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa tsy tokony hanadino ny momba ny very fanahy, izay misafidy ny tsy hiaraka Aminy. Afaka maka fankasitrahana ny zava-bitany, ary handray andraikitra mihitsy aza tsy naka voninahitra hiala amin'Andriamanitra. Efa nahazo ireo fitahiana ireo satria nisafidy ny handeha ny lalana. Omeo voninahitra Andriamanitra ao am-ponao, eritreritra, sy ny vavaka. Ny teny ihany fa, teny. Aza mandainga na. Raha toa ny mpanao gazety nametraka fanontaniana dia nanontany ny fomba efa nanao ny zavatra nataonao ianao, mampiasa ny teny hoe finoana. Ny finoana dia ny safidy, noho ny safidy Andriamanitra efa nifidy mba hitahy anao, rehefa manome voninahitra an'i an'Andriamanitra noho ireo fitahiana ireo Izy no hanohy hanao izany. Ao amin'ny taratasy iray hafa, Raha miady mafy mba hahita asa miezaka hanampy ho an'Andriamanitra kokoa.
Jonathan • Septambra 11, 2013 amin'ny 8:53 PM • navalin'i
Izany no hafatra no tena tokony handre. Hitako ny tenako miady amin'ny tena-marina na dia tao amin'ny Facebook lahatsoratra izay momba an'Andriamanitra. Angamba mila mijery ny antony lalina ao amin'ny zavatra rehetra ataoko. Ry rahalahy sy anabavy ao amin'i Kristy, raha te y'all, mivavaha ho ahy!
Megan • Septambra 11, 2013 amin'ny 10:27 PM • navalin'i
Misaotra be dia be noho ny fizarana ny hafatra. aho 14 ary ny fianakaviako tsy mandeha any am-piangonana àry aho, tena mila izany sy loharanon-karena kristianina hafa sy ny zavatra mba hanampy ahy hahatakatra ny zavatra no momba ny finoana, raha izay mahatonga misy dikany toy izany misaotra anao nizara ny tena manampy sy mampahery.
JB • Septambra 12, 2013 amin'ny 3:35 PM • navalin'i
Mihady izany Trip. Ankasitraho ny tamberina Rahalahy fa indrisy Tsy maintsy manaiky ny tsy mitovy hevitra amin'ny ity iray ity. Tpt.. Misy andininy ao amin'ny Joba izay milaza “Andriamanitra dia manome ary manaisotra” fa ny tenin'i Joba fa tsy Andriamanitra. Joba dia olo-marina sady tsy misy tsiny eo imason'i Jehovah, fa ny fotoana dia nilaza ireo teny ireo dia tonga avy amin'ny tsy mahalala fomba fijery ny fomba Jesosy nahafantatra an'Andriamanitra niasa. Ny famakiana ny alalan 'ny sisa Joba (toko manokana 38-41) Miresaka amin'ny Joba momba ny tsy mahalala efa nolazainy taminy, ary manontany azy ny fanontaniana momba ny tombantombana. In Joba 42:3 (MBC) Joba namaly ho an'Andriamanitra ka nanao hoe:: “Nanontany ahy ianao, 'Iza araka ny hevitrao anao sy tsy mitovy hevitra miaraka amin'ny drafitra? Tsy fantatrareo izay lazainao momba.’ Niresaka momba ny zavatra tsy hahatakatra tanteraka. Niresaka momba ny zavatra izay mahagaga ahy loatra ny mahalala.” Ary ao amin'ny andininy faha-6 Joba nanao hoe:: “Noho izany dia halako ny tenako. Tena miala tsiny aho fa izay no momba anao. Izany no mahatonga aho mipetraka ao amin'ny vovoka sy ny lavenona.” Rehefa nanenina noho ny zavatra rehefa nanomboka handeha tena tsara ho azy indray. Andriamanitra naniry azy mba hahita fa tsy naka ny zavatra rehetra (dia i Satana) ary izany dia ny tahotra Joba naseho tany am-piandohana ny boky izay namela an'i Satana ny fidirana amin'ny hiditra ny ainy. Trip Tsy te-hanao fampisehoana ny resaka momba ny 'fanehoan-kevitra’ koa raha mahita ilaina fotsiny hifandray ny mailaka ho an'ny valin-. Dia tena miaiky ny talenta sy ny fonao mba hanompo an'Andriamanitra ny olona. Taty aoriana
bola • March 28, 2017 amin'ny 4:13 aho • navalin'i
Quality lahatsoratra na hevitra dia ny zava-miafina ny ho fifantohana ny
ny olona mba handoavana ny fitsidihana ny tranonkala pejy, izany no ity pejy ity dia manome.
fandaharana • Novambra 23, 2017 amin'ny 3:14 aho • navalin'i
Y օ U dia izany intereѕting! І Tsy mino marina tokoa aho namaky sometһing toy izany eo anatrehan'ny.
S օ tsara ny mahita olona mbamin'ny olom-bitsy tena thougһts momba thіѕ foto-kevitra.
Rеalⅼy.. misaotra anao Hanombohana izany ny. Ity ѕite dia zavatra takiana amin'ny aterineto, olona amin'ny ѕome оriginality!